डा. हुल्सा पौडेल कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा घरमै बसेर शारीरिक रूपमा सक्रिय जीवनशैली अपनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सक्रिय जीवनशैली नअपनाउँदा विभिन्न किसिमका रोगको शिकार हुनु पर्ने अबस्था आउँछ । यस्तो बेला आफूलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने ? सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी शारीरिक अभ्यासहरु गरेर स्वस्थ रहन सक्छौं । शारीरिक रुपमा सक्रिय रहने अभ्यास...